Zọ 10 a gosipụtara iji kwalite okporo ụzọ na weebụsaịtị Ecommerce gị | Martech Zone
Prozọ 10 a gosipụtara iji kwalite okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị Ecommerce gị
Tuesday, August 20, 2019 Tuesday, August 20, 2019 Aha ya bụ Laura Himmer
"Ecommerce Brands na-eche 80% ọdịda ọdịda"
E-azụmahịa bara uru
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ndị a na-enye nsogbu, Levi Feigenson rụpụtara ihe $ 27,800 nke ọma na ọnwa mbụ nke azụmahịa e-commerce ya. Feigenson, ya na nwunye ya, weputara ngwa ngwa eco-friendly nke aha ya bụ Mushie na July nke 2018. Kemgbe ahụ, enweghị ịlaghachi azụ maka ndị nwe ya yana maka akara ahụ. Taa, Mushie na-eweta ihe ruru $ 450,000 n'ahịa.
N'oge asọmpi e-commerce a asọmpi, ebe 50% nke ahịa na-aga Amazon, ụlọ okporo ụzọ, na ntụgharị abụghị ihe na-agaghị ekwe omume. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị guzobere Mushie gosipụtara na ọ bụ ihe ọjọọ ma meghee ụzọ ha na uto na-enweghị nkwụsị. Ọ bụrụ na ha nwere ike ime ya, ị ga-emelikwa ya.
Niile ị chọrọ bụ asọmpi azum weere na ọnọdụ iji jide uche na ìgwè mmadụ ahụ. Ntuziaka a na-eweta usoro e-commerce nke Mushie tinyere usoro aghụghọ ndị ọzọ iji nweta okporo ụzọ na ụlọ ahịa gị nwere ike ịgbanwe.
Zọ iri iji chụga okporo ụzọ na azụmahịa E-azụmahịa gị
1. Tinye ego na Azụmaahịa Mgbasa
Na mbu, M na ede ihe banyere Google Adwords, mana stats na-egosi na ndi oru adighi aka na mgbasa ozi dika ha adighi atụkwasị ha obi ọzọ. Imirikiti ndị ọrụ 'pịa na-aga na njikọ nke njikọ, akwụghị ụgwọ.
Ọ bụrụ n’abụghị Google AdWords, kedụ ihe kachasị mfe iji tinye ngwaahịa gị n’ihu ọtụtụ nde mmadụ?
Luzụ ahịa luzụ ahịa.
Feigenson ruru ọtụtụ narị nnukwu na micro-influencers iji kwalite ngwaahịa ya. O zigara Jenna Kutcher na ngwaahịa ya, yana ndị na-eso 4000, na Cara Loren, yana ndị na-eso 800,000.
Otu ọzọ ihe omumu nke Silk Almond Milk Kere akụkọ ahụ mepụtara ugboro iri 11 Nlaghachi na itinye ego na mgbasa ozi mgbasa ozi na-emegide mgbasa ozi ọkọlọtọ dijitalụ.
E-azụmahịa ụdị tụlee influencer ahịa dị ka a oké ọnụ ego. Mana Feigenson na-ekwusi ike n'eziokwu ahụ na ị gaghị akpọtụrụ Kim Kardashian iji gbasaa okwu ngwaahịa gị. N'ezie, ọ ga-agbaji akụ gị na enweghị ROI ma ọlị. Kama nke ahụ, chọpụta ndị na-eme ihe ọfụma ka ị gakwuru ndị ahịa dị mkpa karịa onye ọ bụla. Nnukwu na micro-influencers nwere ike ịbawanye okporo ụzọ e-commerce na ugboro iri ROI.
2. Ọkwá na Amazon
Amaara m na onye ọ bụla na-ekwu maka ogo na Google, mana Amazon bụ injin nchọta ọhụụ nke ala E-commerce.
Dị ka ọ dị USA Taa na-akọ, 55% nke ndị na-azụ ahịa ọnlaịnụ malitere nyocha ha na Amazon.
Feigenson ji Amazon sweụọ iyi maka ahịa dijitalụ na-eto eto. Mmezu Amazon abụghị naanị nyeere Feigenson aka ilekọta ngwaahịa ya, kamakwa nye ya ohere ịnweta ọtụtụ ndị na-ege ntị na ngwa ahịa ọhụụ, dị ka Nnyocha Nchọpụta Okwu, iji too ruo mgbe ebighi ebi.
Ewezuga ihe Amazon na-enye, ị nwere ike imeri ntụkwasị obi ndị ahịa ozugbo site na ịnakọta ezigbo nyocha nke ndị ahịa gara aga na ide nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa gị.
Ugbu a ekwula na Amazon bụ onye asọmpi gị. Ọbụlagodi na ọ bụ, ị ga-amụta ọtụtụ ihe gbasara ihe ndị ọrụ na-achọ yana otu esi esi data ndị ahịa Amazon.
3. Kpughee Ike SEO
Nke a na-abịa oge niile ịzụ ahịa kachasị amasị nke ndị nwe ụlọ ahịa weebụ. Site na ịmara ndị ahịa ịde blọgụ na ịkwalite na Amazon ka ị nweta ogo # 1 na Google, SEO na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọkwa ọ bụla.
"93% nke Total Web Okporo ụzọ si Search Ngini."
Chọọ ndị mmadụ
Nke ahụ pụtara SEO enweghị ike izere. N'agbanyeghị ole ahịa mgbasa ozi mmekọrịta na-arị elu, ndị ọrụ ka na-emepe Google ịchọ ngwaahịa ha chọrọ ịzụ.
Iji malite na SEO, ị ga-amalite site na isi okwu. Bido ichikota ndi isi okwu ndi etinye na Google ka ichota ihe di nkpa. Jiri nchịkọta isiokwu nke Google maka enyemaka enyemaka. Ma obu inwere ike iwere ndumodu site na ngwa oru ugwo dika Ahrefs maka Advanced SEO si eme.
Mejuputa mkpokọta mkpokọta anakọtara na ibe ngwaahịa gị, URLs, ọdịnaya, yana ebe okwu ọ bụla chọrọ. Gbaa mbọ hụ na ị gaghị asụ ngọngọ na isiokwu nri. Jiri ha dị ka ihe dị mma iji chebe onwe gị pụọ na ntaramahụhụ Google.
4. Mee atụmatụ nke ọdịnaya
Nweghị ike ide ihe ọ bụla, bipụta ya, ma nwee olileanya maka ndị na-ege ntị ka ha bụrụ abụ nke ngwaahịa gị. Ọzọkwa, ịnweghị ike ịdabere naanị na isiokwu iji gbasaa maka ngwaahịa gị. Ọdịnaya agafewo oke ederede ederede. Blọọgụ, vidiyo, onyonyo, pọdkastị, wdg, ihe niile gụrụ n’okpuru udi ọdịnaya. Ihe e kere eke na-enweghị usoro ga-agbagwoju gị anya banyere ihe ịmepụta, otu esi emepụta, na ebe ị ga-ebipụta. Ọ bụ ya mere atụmatụ ọdịnaya ji dị mkpa iji chekwaa oge gị ma mepụta okporo ụzọ ziri ezi site na ọwa ndị kwesịrị ekwesị.
Nke mbu, dee usoro di iche iche ichoro. Maka ịmaatụ,
Ihe ederede banyere ojiji na uru nke ngwaahịa
Ihe e mepụtara site na onye ọrụ
Ma ọ bụ ihe ọ bụla i nwere na ulo mgwo agha.
Nye ọrụ ahụ n'aka onye edemede, onye mmebe, ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-ekere òkè na usoro nhazi ọdịnaya. Debe onye ahụ ka ọ na-elekọta ya iji nweta ọdịnaya ahụ n'oge ma bipụta ya na ebe kwesịrị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, onye ọkachamara SEO ga-elekọta isiokwu a ga-ebipụta na blọọgụ nke ụlọ ọrụ ma bulie ya na mgbasa ozi mmekọrịta.
5. Kwupụta mmemme Ntugharị
M ka na-echeta ụbọchị mgbe Amazon bụ ihe ọhụrụ na e-commerce, na-ezitere m ozi iji kọọrọ ndị enyi m saịtị ahụ maka ego. Ọ bụ afọ ndị gara aga. Atụmatụ ahụ ka dị omume maka ụlọ ahịa e-commerce ọhụrụ ma ọ bụ ndị chọrọ inweta ngwangwa ngwangwa. N'ezie, na oge mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ịkekọrịta bụ ememe a na-eme kwa ụbọchị, onye ọ bụla nwere mmasị ịnwale ohere ịnweta obere ego iji gbanwere saịtị maka ndị enyi ha. Ndị enyi m na-elekọta mmadụ na-eme ya mgbe niile. Ya mere ejiri m nke ọma banyere usoro a.
Email marketing ka nwere ikike izuru ihe ngosi ahụ, ọkachasị maka saịtị E-azụmahịa. Na ahia email, ị nwere ike iwebata ngwa ahịa ọhụụ nye ndị ahịa gị gara aga maka ịgbalite ọsọ ọsọ. Ọ ga - enyere gị aka ịgbasa websaịtị gị. Ire ahia Email bu kwa uzo ozo eji ewu ewu iji kwalite ọdịnaya, mbata ohuru, ma obu ego. Echefukwala ụgbọ ala ndị ahụ gbahapụrụ agbahapụ, ebe ndị ọrụ na-agbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ala ahụ mana agaghị pịa ịzụta. Na ahia Email, ị nwere ike were ndị ọrụ na njedebe ikpeazụ nke ịzụrụ ngwaahịa ahụ.
Nke a bụ ihe atụ nke email maka ndị ọrụ ụgbọ ala gbahapụrụ agbahapụ:
7. Melite Proofos Proofs
Ihe dị ka 70% nke ndị na-eri ọnlaịnụ na-achọ nyocha ngwaahịa tupu ịzụrụ.
Nyocha ngwaahịa dị ntụkwasị obi ugboro 12 karịa ntụkwasị obi na nkọwapụta ngwaahịa yana nnomi ahịa.
Ihe akaebe bụ ihe akaebe maka ndị ahịa, site n'aka ndị ahịa gara aga, na ha nwere ike ịtụkwasị obi na akara gị na ngwaahịa gị. Amazon juputara na ihe akaebe nke mmadu. Tụkwasị na nke a, ihe ngosi mmekọrịta mmadụ na-esokwa na ọdịnaya, na-enye nri nke engines ọchụchọ maka ibu nke ọdịnaya ndị ọrụ.
Ka a sịkwa ihe mere Amazon ji dị elu maka ọtụtụ ngwaahịa ya.
Bido ichikota nyocha ọ bụrụgodi na o were obere ego. Dịka ọmụmaatụ, kwụghachi ndị ahịa gị gara aga ụgwọ maka ikenye nyocha na onyonyo ma ọ bụ vidiyo iji nweta mmụba ngwa ngwa n'okporo ụzọ ma merie ntụkwasị obi ozugbo n'aka ndị ahịa ọhụrụ.
8. Gosi na Social Media Channels
Social media bụ ụlọ nke abụọ nke ndị ọrụ.
Salesforce kọrọ 54% nke puku afọ jiri usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-enyocha ngwaahịa.
Ikwu okwu banyere onwe m, mgbasa ozi Instagram (dị ka vidiyo) na-emetụta m n'ụzọ dị mfe ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ denye aha maka otu. Yabụ enwere m ike ịsị na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịbụ obere ụdị nke ụlọ ahịa e-commerce gị. Mepụta ụlọ ahịa na ntanetị mgbasa ozi ebe ndị na-ege gị ntị bi ma bipụta ọdịnaya mgbe niile. Gbaa mgbasa ozi yana iji gbasaa mmata ma kpoo okporo ụzọ ozugbo.
9. Etinye ndi n’ire ahia n’iru
Ihe dị mkpa mere m ga-eji wụlie elu maka Amazon maka nyocha ngwaahịa bụ ịhụ ndị kacha ere ahịa na nyocha kachasị. Amazon wuru atụmatụ a nke ọma. Anọ m na-achọ mmanụ kacha mma. Amazon nyere m ezigbo ihe mere ịzụta ya n'aka ndị kacha ere ahịa.
Naanị atụmatụ a, achọghị m igwu ala nke ngwaahịa m ga-azụ. Ana m enweta oge zuru ezu iji gụọ nyocha banyere ngwaahịa a tụrụ aro.
Site n'igosi ngwaahịa kacha ere, ị na-egosi ndị ọrụ ihe ndị ọzọ na-azụ yana gịnị kpatara ha ga-eji gbalịa. Ọ bụ ụzọ egosipụtara iji gosipụta nlekọta gị - ntụkwasị obi ndị ọrụ na - abawanye, nke na - ebute mkpebi ịzụta ha.
Hazie ngwaahịa gị ma wepụ ngwaahịa ndị kachasị ere. Mmemme ha na-abịa n'ihu mgbe ọ bụla ọrụ ịchọ yiri Keywords. Kpido ngwaahịa kachasị ere ahịa na aha dị ka nhọrọ nke akara ma ọ bụ ndị ọrụ akwadoro.
10. Nye Mbupu n'efu mgbe oke ụfọdụ gachara
Tinye otu njedebe maka mbupu n'efu. Ọmụmaatụ, “Dnyefe n'efu na iwu karịrị $ 10”Ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla masịrị gị.
Nke a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ịchọrọ ịbịakwute ndị ọrụ maka ịtinyekwu ihe na listi na-enweghị ịmanye ha.
Ọ bụ oge gị
Thezọ niile a tụlere n’elu dị mfe itinye. Offọdụ n'ime ha na-ewe oge ebe ụfọdụ nwere ike ịbịa rụọ ọrụ ozugbo. Tinye oge na-ewe ọrụ ugbu a, ma tinye ndị otu gị maka ọrụ na-ewe oge. Laghachi ma mee ka m mara nke kacha masị gị. Echiche kacha mma.
Tags: amazoncontent Marketingmbanye ntụgharịụgbọala ụgbọalae-azụmahịaecommerceemail Marketingahịa ahịanyocha ọchụchọNtuziakaAnkwado mmadụ
Aha ya bụ Laura Himmer
Laura Himmer bụ ezigbo nchịkọta akụkọ. Mpaghara niche ya bụ Ntuziaka Ahịa, Fashionde blọgụ ejiji, Ndụ na edemede na-akpali akpali. Ọ bụ ahụike na-ahụ n'anya ma nwee mmasị na yoga. Laura bụ nwanyị na-enweghị atụ na-atụ egwu.
Uscreen: Video Na-achọ na Native TV App Platform
Anyị enwere ike Biko gbuo echiche ụgha ndị a?